ရုရှားနာမည်ကြီးလက်နက်စနစ်များကို ဖျက်ဆီးနိုင်ရန် အမေရိကန်တို့စစ်ရေးလေ့ကျင့် ( အင်အးကြီးနိုင်ငံ ၂ခုရဲ့ကျောင်းတော်က ရန်မီး အခုထိမငြိမ်းကြသေးဘူး….) – Android App Zone
ရုရှားနာမည်ကြီးလက်နက်စနစ်များကို ဖျက်ဆီးနိုင်ရန် အမေရိကန်တို့စစ်ရေးလေ့ကျင့် ( အင်အးကြီးနိုင်ငံ ၂ခုရဲ့ကျောင်းတော်က ရန်မီး အခုထိမငြိမ်းကြသေးဘူး….)
ဖလော်ရီဒါအရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် Emerald လေ့ကျင့်ရေးခေါင်းစဉ်အောက်တွင်အမေရိကန်တပ်မတော်အနေဖြင့် ရုရှားတို့၏ စစ်လက်နက်များကို ဖျက်ဆီးနိုင်ရန် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း Defense Blog က အစီရင်ခံဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုပါဖျက်ဆီးမှုတွင် အက်စ်-၄၀၀ နှင့် ဆူ-၃၄ တိုက်လေယာဉ်များအပြင် ရေငုပ်သင်္ဘောများလည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ကို ပစ်မှတ်အဖြစ် တုပလေ့ကျင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းအတွင်း ရုရှားတို့၏ တီ-၇၂ တင့်ကားကို ပုံစံတူတည်ဆောက်ထားသည့် တင့်ကားများကို အသုံးပြုခဲ့သလို လက်နက်စနစ်များ၊ ကွန်ပျူတာနည်းပညာနှင့် ဂြိုဟ်တုစနစ်များကိုလည်း လေ့ကျင့်စဉ် အတွင်းအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
ရုရှာစစ်ဘက်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည့် Konstantin Sivkov က လက်တွေ့နဲ့ တုပလေ့ကျင့်တာက ကွာပါတယ်၊ သူတို့လေ့ကျင့်တဲ့စနစ်တွေက ရုရှားသာမက ကမ္ဘာမှာအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စနစ်တွေပါ ဒီလိုအလွယ်တကူတော့ ဖျက်ဆီးလို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ ဟူ၍လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လေ့ကျင့်ခန်းများအတွင်း ရုရှားသုံး စစ်ဘက်ကိရိယာများကို အသုံးပြုခြင်းသည်ယူအက်စ်သည် ရုရှားကိုတိုက်ခိုက်ရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သက်သေသာဓကအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့ကြသည်ဟုဖော်ပြထားကြပါသည်။
ရုရှားနာမညျကွီးလကျနကျစနဈမြားကို ဖကျြဆီးနိုငျရနျ အမရေိကနျတို့စဈရေးလကေ့ငျြ့ ( အငျအးကွီးနိုငျငံ ၂ခုရဲ့ကြောငျးတျောက ရနျမီး အခုထိမငွိမျးကွသေးဘူး….)
ဖလျောရီဒါအရှတေ့ောငျပိုငျးတှငျ Emerald လကေ့ငျြ့ရေးခေါငျးစဉျအောကျတှငျအမရေိကနျတပျမတျောအနဖွေငျ့ ရုရှားတို့၏ စဈလကျနကျမြားကို ဖကျြဆီးနိုငျရနျ စဈရေးလကေ့ငျြ့မှုမြားကိုပွုလုပျခဲ့ကွောငျး Defense Blog က အစီရငျခံဖျောပွခဲ့သညျ။
အဆိုပါဖကျြဆီးမှုတှငျ အကျဈ-၄၀၀ နှငျ့ ဆူ-၃၄ တိုကျလယောဉျမြားအပွငျ ရငေုပျသင်ျဘောမြားလညျးပါဝငျခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ကို ပဈမှတျအဖွဈ တုပလကေ့ငျြ့ခဲ့ခွငျးဖွဈသညျဟုဆိုသညျ။
အမရေိကနျတပျဖှဲ့အနဖွေငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးအတှငျး ရုရှားတို့၏ တီ-၇၂ တငျ့ကားကို ပုံစံတူတညျဆောကျထားသညျ့ တငျ့ကားမြားကို အသုံးပွုခဲ့သလို လကျနကျစနဈမြား၊ ကှနျပြူတာနညျးပညာနှငျ့ ဂွိုဟျတုစနဈမြားကိုလညျး လကေ့ငျြ့စဉျ အတှငျးအသုံးပွုခဲ့သညျဟုဖျောပွထားသညျ။
ရုရှာစဈဘကျကြှမျးကငျြသူဖွဈသညျ့ Konstantin Sivkov က လကျတှနေဲ့ တုပလကေ့ငျြ့တာက ကှာပါတယျ၊ သူတို့လကေ့ငျြ့တဲ့စနဈတှကေ ရုရှားသာမက ကမ်ဘာမှာအကောငျးဆုံးဆိုတဲ့စနဈတှပေါ ဒီလိုအလှယျတကူတော့ ဖကျြဆီးလို့ ဘယျရပါ့မလဲ ဟူ၍လညျး ပွောကွားခဲ့သညျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးမြားအတှငျး ရုရှားသုံး စဈဘကျကိရိယာမြားကို အသုံးပွုခွငျးသညျယူအကျဈသညျ ရုရှားကိုတိုကျခိုကျရနျ ပွငျဆငျနကွေောငျး သကျသသောဓကအဖွဈရှုမွငျခဲ့ကွသညျဟုဖျောပွထားကွပါသညျ။
အမရေိကနျနိုငျငံမှာ သဆေုံးသူနဲ့ကူးစကျခံရသူဦးရမြေားပွားလာကွောငျး သိရ
ဖာဂူဆနျ၏အကွံပေးမှုကို ဂရုမစိုကျခဲ့ဟု မနျယူနောကျခံလူဟောငျး ဂယျရီနဗီးလျဝနျခံ
မြန်မာ့တပ်မတော်က ကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်အသုံးပြုနေတဲ့ MAS-2စနိုက်ပါသေနက်အကြောင် တစေ့တစောင်း…. ( တစ်မိနစ်ကို ကျည်ဆန်အတောင့်၃၀ ထိပစ်လို့ရပါတယ်…)